SIPA MANAO BEVOKA AMIN'NY VADINOLONA !
Date: 07 juin 2017 - 14:43
Manahoana daholo tompoko !
Voalohany indrindra aloha dia miaiky ny heloka nataoko za ary manenina tongotra amantànana, Tsy izany fa nisy sipa mpivavaka be amina sekta zay niaraka tamiko dia nilaza fa bevoka izy izy nefa mahafantatra tsara fa manambady za dia noteneniko izy oe esory fa omeko vola hakana azy dia nilaza izy oe tsy mety amin'ny finoako zany de hozizy za oe ary ny miaraka am vadinolona nefa mety amin'ny finoanao de tankina izy ts nahateny.Taty aoriana izy teraka dia noteneniko oe aza manakotaba ny tokatranoko fa naka décision ianao anao irery dia rehafa miteraka de tazomy ho anao irery. De ts haiko zany ny hataony amiko aminizay amzao hoe hanao pression amiko ve izy sa de ho tazominy any fa rehefa lehibe le zaza dia ho avy any amiko ?
Re: SIPA MANAO BEVOKA AMIN'NY VADINOLONA !
Date: 07 juin 2017 - 15:06
Tsy misy mpaminany eto ka hahalala izay hataony.
Niara-nanamboatra zaza nareo fa tsy izy irery no nanao an'iny koa nahaoana izy no terenao hanala zaza izay mety haningotra ny ainy. Samy diso ianareo nanao firaisana fa ianao tia tena be sy tsy te ho tompon'andraikitra. Raha izaho no eo @ toeran'ilay vhv mibebaka tsara za dia ataoko izay hahavelona tsara ny zanako ary tsy mitamby izay rain-janako any aho fa avelako ho any izy sy eritreriny. Ianao io zao tsy mandry eritreritra matoa manoratra eto. Hoy ny ntaolo "aleo enjehin'ny mpamosavy toy izay enjehin'ny eritreritra. Tena marina loatra ary mety hahalasa adala.
Date: 07 juin 2017 - 15:15
Voalohany aloha dia hitako vehivavy ianao mpanokatra sujet.
Manaraka an'zany dia tonga dia any am-pivorian-tsekta manontany, tonga dia mahazo réponses bedabe.
Par: zaza sary
Date: 07 juin 2017 - 15:45
Za dia zanaka azo tamina situation tahaka izao ihany. Izany hoe victime tamina fiarahana olon-droa ka sendra ny Ray mandositra adidy tahaka an’io olona manoratra eo ambony io. Ny tiako ambara dia : tsy ilay Reny irery no hanana olana eo fa ny zaza izay hateraka ihany koa. Ilay zaza teraka eo dia ho banga zavatra maro (=> tambitambin'ny rainy, fananarana, fiarahana) tena enjana io rehefa mampitovy ny tenany @ hafa izy . Ankehitriny feno fankahalana raiko za; ary tena fankahalana lalina hatramin’ny oe kapako amin’ny famaky raha mifanena amiko. Samy manana ny toetrany ny olona; kanefa mino aho hanana toetra hiombonana ihany izay mitovy cas. Enga anie mba tsy ho toy izany ny zanakao io manoratra etsy ambony io. Fantaro fa misy vidiny ny zavatra rehetra fa ny fotoana hanefana azy mety oe tsy hay oe rahoviana.
Date: 07 juin 2017 - 16:21
Ny tsy azoko zany @situataion tahaka itony de manina ny vehivavy fona no diso sy mizaka ny tsy eran'ny aina?
Date: 07 juin 2017 - 22:24
Ny cas mitovy @ nataonao io betsaka .Conseils omeny dia soit un Homme fa tsy sarim-bavy . Mora ny mitaingina sy miteraka fa ny responsabilité etsy an-daniny .Marina fa sipa notifitifirina tany am-badika tany ,tsy fantatry ny vadinao izay fijangajangana sy heloka koa . Araky ny voalazan'ny olona tetsy ambony ,anankiroa ianareo no nanao ilay zaza .Bon tsy nety nesoriny ilay izy nefa acte avec consentement . Ilay zaza izany no victime satria tsy choix any no ho tonga teto an-tany .
Na sarotra aza ny position misy anao dia mba mila manome vola anilay sipa isam-bolana mba manampy ara -tsakafo ,ara -pitafiana ,ny fianarany sns....Mba fantany hoe mi assume .Tôt ou tard mety hipoaka ihany ny tantara surtout rehefa ehibe ilay zaza dia mba aleo tsara relation na dia miafina aza .Voilà !
Date: 08 juin 2017 - 10:38
Miala tsiny mialoha ho an'ny mpamorona ny sujet ra mety mafimafy ny teniko, vhv za ary efa nihainako ny fampirafesana nataony vadiko ahy,mafy zany tena mafy; ka voalohany aloha de maka ny toeran'ilay vadinao za satria na ho ela na ho aingana de tsy maintsy ho fantany io ka @ zay fotoana izay de mety ho votso-droa ianao satria mafy ho azy ny iaina io situation io ary mety ho sarotra ho azy ny hamela anao, faharoa maka ny toeran'ilay vhv niterahanao ndray aho de miomana fa tsy avelany hilamina zany ny tokatranonao fa tsy maintsy hanakorotana farany ze azo atao izy satria nahoana kosa moa, bref zany tsy hoe faly hanenjika aho fa io fampirafesana io de fahafinaretana vetivety fa ny vokatra azo avy aminy dia fahasimban'ny fiainana manontolo , efa tsara aloha refa nahatsiaro diso enao saingy tokony sainina tsara aloha ny mety ho vokatry ny atao zao vao mijoboka e,mahereza sy mahatanjaha fa adidy goavana no miandry
Date: 08 juin 2017 - 13:14
Zaho aloha lehilahy fa zaho aloha tsy mankasitraka izany IVG izany na avortement izany. Azoko fa grave ilay situation misy enao fa mila miresaka nareo, ary aza tezitra aminy fa ampio izy araka izay azo atao fa zanakao io. Fa atsy andaniny dia tsy tokony hikotaba enao ilay vehivavy satria efa fantany ny situation nao efa manambady.
Zaho koa ange misy sipa niarahako izay tena tiko ary efa saika Haka vady azy aho fa nohony fianarana nataoko taty Londres moa tafasaraka izahay ary efa samy manambady. Izy moa nisaraka t@ vadiny nandritra izy bevoka ka tena sahirana satria karama kely hono. Hitany moa aho t@ facebook ka nanoratra tamiko izy @ ilay problème nisy taminy ka nohony fitiavako azy nomeko 2000 livres( hikarakarainy fiterahana) izy fa tsy fantatra madama io fa vola kely izay voahangoko. Fa tena faly be izy tsy misy hoatran'izany ary misy fotoana aho mbola mandefa 50 na 40 livres fa tena ravoravo be izy.
Taty aoriana moa izy nilaza tamiko mba hampandre azy raha sendra mandeha manao vacances aho ary mipetraka any aminy raha irery fa mbola tia ahy hono izy na efa manambady aza zaho. Io moa zany no hatahorako, ny miaraka aminy tsy mampaninona ahy, rs izany fa sao te hamitaka ka hanao zaza amiko ? Mampanahirana avy eo, te hiaraka indray aminy aho fa matahotra be sao misy piège ilay fitiavana.
Tena vakiloha aho fa mahita tantaranao izao, aleo hilamina fa tiko ny tokan tranoko.
Date: 08 juin 2017 - 15:15
Ny fiterahana na procréation dia fanapahakevitra lehibe tokon'ny hifampieran'ny vavy sy lahy miaraka.
Ny olombelona dia mila fitaizana ny ray sy reny miaraka (environnement familial) fa tsy biby akory ka fahanana sakafo dia ampy azy.
Mba hisorohana ny zaza tsy nirina dia efa betsaka ny fomba medikaly azo atao miainga amin'ny pilina fanabezana haizana, ny fimailo, ny avortement, sns.
Amiko raha fantatr'ilay vehivavy fa tsy irin'ilay lehilahy ilay zaza nefa mbola tazominy ihany dia tsy mety.
Tena betsaka ny cas hitako momba io amin'ny maha mpiasan'ny fahasalamana ahy.
Matetika dia tsy maintsy hahita lehilahy hafa indray ilay vehivavy rehefa afaka taona vitsivitsy dia eo vao tavela ilay ankizy satria vitsy isika Malagasy no tia zanadrafy izany.
Date: 08 juin 2017 - 17:15
Misaotra anareo rehetra tamin'ny remarq sy ny kiana ary ny sosokevitra fa tena marina fa manenina zaho ankehitriny tamin'ny nataoko ary vaky ny lohako aminy hoe ahoana ny hamborahako io hadalako sy tsy fitandremana nataoko io any amin'ny vadiko. Tiko be ny vady amanjanako sy ny tokatranoko ary tena ts hampirafy intsony aho.
Nanoratra ity eto za mba hitady vahaolana sy mba hampitandrina izay manao hadalana nefa mbola ts tradoza hoatrizao.
Mr6 >>omena tena io hevitrao io no nahatonga ahy tezitra taminy fa na akoho hatao lôka ao antrano aza ifampierana vao maty nefa ny azy dia tsisy resaka fa tsy mety amin'ny finoany hono ny manala zaza.
Date: 09 juin 2017 - 11:16
Soa lavo hahay mamindra ry Sombitika fa dia tsy te ho eo am toeranao mints izahay.
Zavatra 2 ihany no mety hiseho :
- Na enao hisara-bady, satria vitsy iany ny vhv hanaiky hamelona zana-drafy izany. Dia alaivo vady rasipa zany
- Na enao tsy hisaraka fa kosa ho voahitsaky ny vadinao hatrany an-tampon-doha satria efa rava teo any ilay contrat natao tam nivady hoe hifanaja. Dia ahoana tokoa moa raha ny vadinao indray no miteny hoe bevohoka aho r'ise fa zanak'ilay bandy sipako izy ity, nefa zah tsy te hanala zaza zany?
Tsy manenji-dresy ny tenanay satria tena mazana ny vokatr'ilay fiodonan-dranamana fa te-hamerina foana ny hafatra fanaon'ny oul eto am forum oe, rehefa tiana rangahy/ramatoa ny vady dia hajaina izy a. Resaka lainga zany oe tiako be ny vadiko fa mba miodina ihany ah. Tsy compatible zany fitiavana sy fiodonana zany, ary ny accident ôtrzao dia misy betsaka any am fiarah-monina any. Firifiry ny mère célibataire sy ny célibataire manao IVG ary ny vhv vadin'oul mitondra zana-baratra?
Courage foana e
Date: 09 juin 2017 - 12:37
Ary ireny eny Tsaralalàna ireny koa ve raha bevohoka dia hisy arakaraka be sahala amin'izao?
Date: 09 juin 2017 - 15:12
Ka dia misolitika , enjano izany ny salaka , akaro ny vozona fa dia ho avy ny zanaka am-pielezana e. Inona kay ny maharatsy izany ,
Fenoy tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny isan'ny ankizy ety an-tany , akory atao fa dia mifalia arahin-jaza lahy na vavy e!!!
Dieny izao dia resaho mazaVA sy fantaro ny ao an-dohany , arak'io no iresahano amin'ny vadinao mazava ny zava-misy . Ho tezitra izy , alahelo , fa amboary ny saina , ary onero ny fahotana natonao , correct ianao amin'ny vadinao mandra-paha (vola, tamby ) ;Sarotra io fa de tsy maintsy .
Date: 28 août 2017 - 21:29
Za vehivavy,fa io zany bien que samy diso,vehivavy no tompony decision,tsy tokony hisy zaza tsis ray zany fa matoa zany misy dia safidiny vehivavy ny hiteraka azy,vo premier mois d fatatsika fa tsy tonga regle eo dia afaka tapahana ny vohoka,tsy miandry fanalana zaza,ra zaho.ny lehilahy de avelako any....
Date: 29 août 2017 - 07:55
na o ela na ho aingana de hivaly aminao ny tody fa aza manahy
Date: 29 août 2017 - 10:04
Tena mba enjana kosa zany histoire zany. Tadidio anefa fa ho anareo lehilahy manao tsinontsinona vehivavy ireo dia misy farany ny zavatra rehetra. Ianareo ireo anie ka mba notezain’ny RAD-nareo ihany e ! dia ho sahinareo ve ny hamela ilay tsy manan-tsiny ho sahirana irery. Sady niaraha-nanao io zavatra io ka tokony handray ny andraikitrao ianao. Ny vadinao koa moa zany efa nitsahinao rahateo koa inona no antenainao ? ilay zaza ahilikao nefa ianao koa dia anisan’ny nahatonga azy ety an-tany. Efa maro ny cas hitako fa tsy nahafoy ny zanany ny lehilahy na dia manambady aza. Manome fanampiana fona izy. Ka mba alaivo ambony alaivo ambany ihany re sao ho hanenenana ty toetra e
Par: aza dia mitsaoka
Date: 29 août 2017 - 10:20
Aza dia manome tsiny hoe nanao bevohoka tsy niera izy. Olon-dehibe ianao, tokony mahafantatra hoe rehefa manao amin'ny vehivavy ianao tsy mba mampiasa fimailo dia mety ho bevohoka foana izy. Ny ankamaroan'ny olona aza dia teraka tsisy teny ieran'ny mpivady izany hoe ndao hiteraka fa manao dia bevohoka. Hafa raha hoe efa tsapany fa mitady hiala aminy ianao dia nofandrihany, hafa kosa rehefa ianao no sady tsy nanaja ny tokatranonao no tsy mba mitandrina sy mieritreritra dieny aloha ny mety ho vokany.
Azonao atao izy hoe ny maka vadin'olona nety tamin'ny finoany koa ny hanala zaza tsy hiety. Fa ianao koa azo atao tsara mihitsy hoe nanisy azy nety taminao ka ny hitaiza ny zanany tsy hiety ?
Ny torohevitro ho anao dia izao : Aza ariana ny zanaka. Na tsy hanelingelina anao sy ny eritreritrao aza ny fisiany amin'ny fiainanao rehetra dia rehefa manoloana ny fahafatesana ianao tsy ho afa-miala fa hanenenanao izany. Raiso dieny izao ny adidy sao tara loatra. Tsy voatery hoe lazainao ny vadinao izany, tsy voatery hosoratana amin'ny bokim-panjakana hoe zanakao izy etc. raha izay no manahirana anao. Fa tena anjaranao sy adidinao kosa ny mitady ny fomba hanampianao ny zanakao sy tsy hahatsapany be loatra fa zaza tsy nirina izy.
Date: 29 août 2017 - 12:54
Ho ahy manokana dia lâche enao ary tsy responsable, sady tsy manana fahamatorana.
1- tsy noterena mihintsy enao hanao firaisana aminy na iharaka aminy
2- Ny za ao ankibe dia tsy vita avy @ ovule ftsn fa mila sperme ihany koa
3- tena mahavita enao mandao ny menaky ny aina amzao ka vitan'ny oe avelao any
4- mpetraha enao eo am toeran ilay zaza niarahanareo natao
farany, tsy fanomezana tsiny ny ahy ary tsy mitsara anao aho fa milaza ny hevitro ftsny.
Date: 29 août 2017 - 15:31
Za zao de tratran izan,tsy hoe za no bevoka fa ny vadiko no nahabevoka ary efa teraka. Hatramzao nefa ny vadiko tsy miresaka amiko mintsy hoe misy anzany fa fantatro (nisy nanoro ahy ny tranony sy ny numero ny).Arahako maso ny compte ny de tratrako hoe nandefa mvola tany amle renin ilay zaza izy.De ts tokony ho tezitra ve za ???Zahay nefa mananjanaka 3.Vao omaly zan no hitako ka romotra be za fa mbola ts nifampiresaka aloha fa mbola mandinika ny tokony hataoko aho.
Mba omeo hevitra ho anzay mamaky.
Date: 29 août 2017 - 15:41
Tratra> tsy @ toeranao aho d sarotra be ny hanoro hevitra hoe zao hatao. Ny fantatro fotsiny dia mafy tena mafy izany maazo hanao zan. Marina ny anao , aleo mandinika tsara aloha vao mandray décision, ankino @ Andriamanitra fona ny fiainana, na ny alahelonao. Sarotra ny mamela heloka surtt @zany situation. Mampahery anao ny tenako
Date: 29 août 2017 - 16:21
Zao dia vehivavy niteraka t@ vadin'olona .Rehefa nahazo io zazavavy kely io izahay dia nifanaraka tsara fa ijanona ho tsiambaratelonay roa i pisokely . Tsoriko nefa fa tsy mora ny miaina io zavatra iray io nefa izaho mandinika sy mahatsapa fa zakaina ny fidin'ny ny fangalarako fitia t@ny . Tsaroko foana koa ny teny nifanarahanay roa ary tiko izy ka tsy animba ny efa nahoriny amataonany maro aho .Ny hany hadisoako dia ny fangalarako fitia t@ny .Ka miresaha ianao @ ilay olona dia lazao mazava @ fa efa fantany fa manambady ianao ,ataovy iany koa nefa ny adidinao @ lay zaza .Refa tsy mahatohana nefa ny teninao dia mino aho fa ho tsapany ny anjarany ao anatin'ilay zavatra miseo,samy topona'andraikitra ianareo roa ka ataovy izay ifanarahana.
Date: 29 août 2017 - 18:07
Tratra: enao zao ny tena voa noho ilay zaza sary sy ilai sipa nngalabadinolona satry lasa mapiditr fahotana ho anao ilay izy,tsy tinao avy hatrany reo olona reo ary c la nature tsy hanaiky mitsy enao hanampina anireo,ka muverina aminy volazako teo ambony za,tsy misy zaza sary,sy zaza tsis ray zany raha tsy ilay vehivavy nanapakevitra oe tazomiko ty,noho izany izaho vehivavy,fa tsis rarahiko zay zaza sary any... Meme isamel zanaki hagara anie ka nomeny oe ty anjaranao.et disparait de ma vue....lol
Date: 02 septembre 2017 - 09:46
Afaka avadika koa ity sujet ity hoe vadin'olona nahabevoka zanak'olona